Kooxda Tifaftirka Blusens | Wararka Gadget
NewsGadget.com waa mid ka mid ah websaydhada tixraaca ee Isbaanishka qalab, softiweer, kombuyuutar, internet iyo guud ahaan tikniyoolajiyadda. Laga soo bilaabo 2006 waxaan maalinba maalin ka soo warami jirnay horumarada ugu waaweyn ee dhinaca teknolojiyadda, iyo sidoo kale falanqaynta aalado fara badan laga bilaabo kombiyuutarada ugu awoodda badan illaa kiisaska ugu fudud ee taleefannada casriga ah, oo ay ku jiraan kuwa ku hadla, kormeerayaasha, taleefannada casriga ah, kiniiniyada ama robotka nadiifiyeyaasha robotka ah si aad u bixiso tusaalooyin yar. Waxaan sidoo kale ka soo qayb galnaa dhacdooyinka farsamada ugu weyn adduunka sida WMC ee Barcelona ama IFA ee magaalada Berlin halkaas oo aan u kaxeyno qeyb ka mid ah kooxdeena tafatirayaasha si ay u awoodaan inay dhameystiraan raadraaca dhacdo oo akhristayaashayada u soo bandhig dhammaan macluumaadka qofka ugu horreeya iyo waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
Sidoo kale, gudaha qaybta casharradayada waxaad ku heli kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee macluumaadka la taaban karo buugaag talaabo-tallaabo oo dhammaystiran oo ay ku jiraan sawirro iyo / ama fiidiyowyo caawimaad ah oo daboolaya mowduucyo aad u kala duwan oo ay ka socdaan sida loo qaabeeyo kiniiniga Android a sida looga soo degsado sawir facebook inaad tusaalooyin ka bixiso.
Haddii aad rabto inaad ku aragto inta ka hartay mowduucyada aan wax ka qabanno mareegtada kaliya waa inaad ku aragtaa gal bogga qaybaha halkaasna waxaad ka arki kartaa dhammaantood iyagoo ku habboon qaab mawduuc ah.
Si loo diyaariyo dhammaan waxyaalahan tayada leh iyo sida ugu adag ee suurtogalka ah, Actualidad Gadget waxay leedahay koox tafatirayaal ah oo ku xeel dheer cilmiga tikniyoolajiyadda iyo sannado badan oo waayo-aragnimo ah qorista waxyaabaha dhijitaalka ah. Haddii aad rabto inaad ka mid noqoto kooxdayada tifaftirka kaliya waa inaad buuxisaa foomkaan waana kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Tifatiraha Geeky iyo falanqeeye. Jacaylka qalabka iyo tiknoolajiyada cusub. Waxaan xiiseynayaa inaan ogaado oo aan tijaabiyo dhammaan noocyada qalabka, taleefannada gacanta, kumbuyuutarrada, kumbuyuutarrada, laptop-yada, iyo kuwa kale, waxaana ku faraxsanahay inaan aqoonteyda adduunka kula wadaago ereyo.
Tan iyo horraantii 90-meeyadii, waxaan jeclaan jiray wax kasta oo la xiriira tikniyoolajiyadda iyo xisaabinta. Sababtaas awgeed, tijaabinta aalad kasta oo noocyada waaweyn iyo kuwa yaryar ay soo saaraan, falanqeeyaan si ay uga faa'iideystaan, waa mid ka mid ah hiwaayadaha ugu xiisaha badan
Waan jeclahay wax kasta oo la xiriira tikniyoolajiyadda iyo dhammaan noocyada qalabka. Waxaan falanqeynayay dhamaan noocyada qalabka elektarooniga ilaa 2000s mar walbana waan ka warqabaa moodooyinka cusub ee soo baxaya. Xitaa xoogaa waan qaataa markaan ku dhaqmo waxyaabo kale oo xiisahayga ah, sawir qaadista iyo guud ahaan cayaaraha. Iyaga la'aantood iskama mid noqdeen!
Waan jeclahay tikniyoolajiyadda, maahan wax walba Apple. Waxaan isku dayaa inaan helo dhammaan qalabka aan kari karo ee gurigayga gala ...
Xamaasad badan ayaan u qabaa teknolojiyadda, waxaan ku raaxeystaa sida cunug qalabkiisa wata. Waxaan jecelahay inaan isbarbardhigo moodooyinka kala duwan, soo ogaado astaamo cusub, oo aan barto kuwa cusub ee soo socda. Qalabka wuxuu nolosheena wax badan uga fududeyn karaa, waana sababta aan u jeclahay inaan la wadaago waxa aan ka ogahay iyaga.
Laura Torres sawir qaade
Farsamo xamaasad leh. Saynisyahan kombuyuutar oo waqti-dhiman ah oo xiiseeya mowduucyo kala duwan oo aad u kala duwan sida otomaatiga xafiiska, adduunka android, ciyaaraha fiidiyowga iyo xitaa adduunka mootada. Qalabkayga ugu horreeya ee aan xasuusto waa kii Sony HitBit iyo Commodore.
Anigu waxaan ahay injineer jacayl u leh teknoolojiyada cusub iyo wax kasta oo ku xeeran shabakadaha shabakadaha. Qaar ka mid ah aaladaha aan ugu jeclahay maalin kasta way i raacaan, sida taleefannada casriga ah ama kiniinnada, aalado iga caawiya hagaajinta aqoontayda iyo khibradayda qalabka.
Xirfadle kumbuyuutar inkasta oo uu jecelyahay adduunka tikniyoolajiyadda guud ahaan iyo gaar ahaan robotiyada, qiiro ii horseedaysa in aan baaro oo aan baaro dhammaan shabakadda anigoo raadinaya nooc kasta oo cibaaro ah oo ku saabsan aaladaha, ha ahaato daraasad ama mashruuc.
Tiknoolajiyada cusubi waa hamidayda dhabta ah. Waxaan sii wadaa inaan ku raaxeysto sida maalinta ugu horreysa ee aan ka hadlayo qalab kasta oo suuqa ku dhaca: astaamaha, tabaha, ... marka la soo koobo, gabi ahaanba wax walba oo ku saabsan qalab elektaroonig ah.
Waxaan aad u xiiseeyaa teknolojiyadda, gaar ahaan taleefannada gacanta. Waxaan ku raaxaystaa ogaanshaha wararka ku saabsan aaladaha, iyo tijaabinta si aan u ogaado, sidaas darteed, haddii ay keenaan wixii ay ballanqaadeen ama haddii ay yihiin aalado aan runtii xiiso u lahayn maalinba maalinta ka dambaysa.
Gadgetmaniaco, oo ku raaxeysta aaladaha tijaabinta ee loo isticmaali karo in lagu muujiyo naftiisa qaab kasta oo farshaxan ah. Intaa waxaa dheer, waxaan jecelahay inaan tijaabiyo qalab kasta oo igu soo dhaca, sidaas darteed waxaan khibrad badan u leeyahay teknoolojiyada cusub waxaanan ku raaxeystaa xallinta wixii shaki ah ee ka dhalan kara inta la isticmaalayo iyo sida loo qabanayo.
Saynisyahan kombuyuutar ah oo had iyo jeer ku raaxeysta baaritaanka aaladaha cusub ee suuqa ku soo socda. Haddii ay jirto hal shay oo aan jeclahay inaan ku qaato waqtigayga firaaqada, waxay si fiican u baareysaa qalab kasta oo elektaroonig ah oo igu soo dhaca.
Waan jeclahay wax kasta oo xiriir la leh tikniyoolajiyadda iyo qalabka. Waxaan had iyo jeer doonayaa inaan barto dhammaan khiyaamada noocyada aaladaha kala duwan ay leeyihiin, oo waxtar u leh tamashleynteena ama shaqadeena.
Had iyo jeer kuxiran qalabka iyo qalabka farsamada. Waxaan tijaabiyaa, falanqeeyaa oo wax ka qoraa taleefannada casriga ah iyo dhammaan noocyada aaladaha, aaladaha iyo aaladaha teknolojiyadda xilligan. Iskuday inaad markasta ahaato "on", aad barato oo aad la socotid wararka oo dhan.
Dhallinyaro jecel teknolojiyadda iyo adduunka mootada. Ogaanshaha aaladaha si qoto dheer, markaan arko sida ay u shaqeeyaan ama sida ay u horumariyeen waa wax aan aad ugu faraxsanahay.
Waxaan ahay nin jecel farsamada casriga ah. Waxaan jecelahay inaan barto illaa inta ay ku saabsan tahay maaddadaas, gaar ahaan aaladaha. Qof kastaa wuu i xiiseeyaa, laakiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, otomaatigga iyo / ama otomatiga guriga iyo sirdoonka farsamada ayaa ah daciifnimadayda.
Qalabku had iyo jeer wuu i xiiseeyaa, laakiin imaatinka taleefannada casriga ah ayaa badiyay oo keliya xiisaha aan u qabo wax kasta oo ka dhacaya dunida tiknoolajiyadda. Waxaan si dhab ah u aaminsanahay inaysan jirin qalab ka wanaagsan kana waxtar badan intaas.
Xamaasad badan oo ku saabsan internetka iyo tikniyoolajiyadda cusub, waxaan marwalba jeclaa isku dayga dhammaan aaladaha ku dhacay gacmahayga, anigoo ogaanaya dhammaan adeegsiyadoodii ay haysteen, isla markaana isbarbar dhigaya noocyadoodii hore si aan u arko inay runti hore u soo hagaageen iyo in kale. Waxaan jecelahay inaan ogaado dhammaan wararka ku saabsan aaladaha aan helo, aqoonta aan jeclaan doono inaan kula wadaago.